”Iyada ayaa ka xaasidsan walaalkeed!” – Wax kasta oo aad uga baahan tahay gabadha dhaxli karta xukunka Kuuriyada Woqooyi ee Kim Yo-jong | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Iyada ayaa ka xaasidsan walaalkeed!” – Wax kasta oo aad uga baahan...
”Iyada ayaa ka xaasidsan walaalkeed!” – Wax kasta oo aad uga baahan tahay gabadha dhaxli karta xukunka Kuuriyada Woqooyi ee Kim Yo-jong
(Pyongyang) 26 Abriil 2020 – Walaasha hoggaamiyaha North Korea ee Kim Jong-un ayaa lagu warramayaa inay diyaar u tahay inay xilka tirsato haddii uu meesha ka boxo walaalkeed oo la sheegayo inuu ama dhintay amaba uu sakaraad yahay, kaddib markii dhakhtar jaraynayaa wax ka khalday qalliin wadnaha lagaga sameeynayey, iyadoo ay ilmihiisu ay aad uga yar yar yihiin inay xil qaadaan.
Yeelkeede, khubarada ayaa ka digaya in Kim Yo-jong ay kaba naxariis darraan karto kali taliyaha iyada la dhashay oo 8 sanadood xilka hayey, si ay ”awooddeeda u muujiso.”
Sida uu qoray Daily Mirror, ayaa sheegay in walaashii laga cabsi qabo inay isaga fara dheeraato, iyadoo gaar ahaan isaga la wadaagta hiwaayadda hub jacaylka.
Professor Natasha Lindstaedt, oo u warrantay Daily Mirror, isla markaana ku xeel dheer rajiimyada kali taliska ah ayaa sheegtay in jinsigu aanu ka xannibi doonin Kim Yo-jong inay xilka la wareegto, si loo sii amba qaado jagadan ay halka qoys kala dhaxlayeen tan iyo asaaskii NK oo ku beegan 1948-kii oo uu MW noqday awooweheed Kim Il-sung oo uu wadnuhu istaagey 8-dii Luulyo, 1994-kii.
Kim Yo-jong, oo baratay culuunta kombiyuutarka ee computer science oo ay uga qalin jebisey dalka Switzerland, waxaa halkaa kula sugnaa walaalkeed, cunto kariye iyo koox ilaalo ah oo si gaar ah loo tababaray.
Markii uu xilka la wareegey walaalkeed Kim Jong-un, waxay waxbarashadeeda kasii wadatay Jaamacadda Pyongyang, ilaa ay markii dambe kusoo biirtay xaydaabka horseedka ah ee xukuma dalkaasi.
Kim Yo-jong waa gura dambayska 5 carruur ah oo uu dhalay Kim Jong-il, oo uu walaalkeed xilka ka dhaxlay kaddib markii uu wadnuhu istaagey 17-kii Diseembar, 2011-kii.
Gabadhan oo aad ugu dhow walaalkeed, inta badanna la arko iyada oo daba taagan ama dhinac fadhida, ayaa waxay ku nooshahay nolol baashaal ah oo ka fog midda ay ku jiraan dadka busaaradaysan ee dalka WK.
Sababta gabadhan musharraxadda ka dhigaysa, haddii uu walaalkeed dhinto, waa in walaalka kale ee Kim Jong-chul loo arko naago shaneeye aan xiise badan u haynin siyaasadda.
Walaalkii kale Kim Jong-nam isaga waxaa 2017-kii lagu khaarajiyey dalka Malaysia, halka gabadha kale ee Kim Sol-song aan iyadana loo arkin qof hoggaan ka bixi karta.
Sung Yoong Lee, oo ah Kuuriyaan Maraykan ku xeel dheer arrimaha labada Kuuriya ayaa sheegay in gabadhani ay ka naxariis daran tahay awooweheed, aabbeheed iyo walaalkeed oo xilka dalkaasi iska dhaxlayey muddo 70 sano ku dhow.
Maalin dhowayd markii ay South Korea hubka tijaabiyey waxay nidaamka ay xafiiltamaan ee Seoul ku tilmaantay “eey cabsi la qaylinaya” mar ay ka hadlaysey awoodooda.
Previous articleXAL CUSUB: UK oo qaadaysa ololihii ugu ballaarnaa ee ka dhan ah cudurka Covid-19 (Difaaca jireed ee 50 milyan qof oo la baarayo)
Next article”Hal mar ayuu sare joogga ka dhacay!” – Xog dheeraad ah oo kasoo baxaysa waxa ku dhacay Kim Jong Un